सूचनाको हकको अवस्था र कार्यान्वयनका चुनौती | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर सूचनाको हकको अवस्था र कार्यान्वयनका चुनौती
कृष्णहरि बास्कोटाको जन्म २०१५ साल फागुन १५ गते भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए, बीएल र इटालीबाट सार्वजनिक प्रशासनमा पोष्ट ग्य्राजुएट गरेका छन् । २०३७ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका बास्कोटा २०५१ सालमा अछामको प्रजिअ थिए । उनी २०५६ देखि २०६० सालसम्म वाणिज्य विभागको महानिर्देशक र २०६० देखि २०६२ सम्म भन्सार विभागको महानिर्देशक भए । त्यसपछि उनी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखाको प्रमुख भए । २०६५ सालमा राजस्व सचिव भएका उनी २०६८ मा अर्थ सचिव भए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवबाट अवकाश भएपछि उनी प्रशासन सुधार समितिको संयोजक भए । त्यसबेला काठमाडौंको सडक विस्तारको नेतृत्व लिएबापत उनले उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पनि पाए । उनी २०७१ पुसदेखि प्रमुख सूचना आयुक्तमा कार्यरत छन् ।
सूचनाको हक र कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने काम
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको जनताको मौलिक हक हो । यदि नागरिकको यस हकमा कहीँकतैबाट अतिक्रमण भएमा संवैधानिक उपचारको हकअन्तर्गत संविधानको धारा १३३ र १४४ बमोजिम क्रमशः सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतबाट परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी हुनेछ । साथै नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्न एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक मौलिक हकमध्येको श्रेष्ठ हक हो ।
लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही शासनप्रणाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तीकरण पर्छन् । यसको अनुभूति आम जनताले सूचनाको हकमार्फत गर्छन् । यसका कारण सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा जनताले सूचना माग नगरे पनि सार्वजनिक निकायले ३/३ महीनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती निकायले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । नेपाली भाषाको अलावा स्थानीय जनताले बोल्ने र बुझ्ने राष्ट्रिय भाषामा आफ्ना सामग्री प्रकाशित÷प्रसारित गर्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्ना निकायका २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । नागरिकलाई दिन मिल्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ । कानूनबमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गरी अधिकतम ३० वर्षसम्म सूचना संरक्षण गर्न सकिन्छ । आम जनताले सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गरेपछि तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । कथंकदाचित् सूचना सङ्कलन गरेर दिनुपर्ने भए अधिकतम १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग भएको भए २४ घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले तोकिएको समयभित्र सूचना नदिएको कारण कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी परेमा निजले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा नागरिकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । आयोगले सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गरेपछि सम्बन्धित निकायले सूचना दिने पक्का हुन्छ, अन्यथा आयोगले सूचना नदिने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्छ ।
सूचना दिनु सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायको दायित्व हो भने सूचना माग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । यही अधिकारको प्रयोगबाटै जनता रैती वा प्रजाबाट नागरिकमा स्तरोन्नति हुने हुन् । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन जनताद्वारा जनताकै लागि सञ्चालित हुने हुँदा मुलुकमा नागरिक सर्वशक्तिमान् मानिन्छन् । नागरिकको यस्तो महत्त्वपूर्ण सूचनाको हकलाई अझ बलियो तुल्याउन संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हकको साथै प्रवाहको हक पनि थप गर्नुपर्छ । मुलुकका सातैओटा प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नुपर्छ । सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानून संशोधन गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि कानूनबमोजिम सूचनाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन, तत्कालै वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारीको शपथमा रहेको गोपनीय शब्द हटाउनुपर्छ । सरकारी कागजातमा लगाउने गरिएको गोप्य र अति गोप्य छाप लगाउने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ । ‘ह्वीसेल ब्लोर प्रोटेक्सन एक्ट’ र ‘प्राइभेसी एक्ट’ जारी गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायहरूबाट जारी हुने तीन–तीन महीने स्वतः प्रकाशन एउटा छुट्टै पोर्टलमा राखी सूचना बैङ्क निर्माण गर्नुपर्छ । सूचनाको हकको प्रचलनलाई बढावा दिन खर्च गर्ने गरी आरटीआई बजेटको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । यसैगरी सूचनाको हकको प्रचलनको स्थिति बुझ्न आरटीआई अडिट गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई तक्मा, पुरस्कार र बढुवा दिन सूचना प्रवाहमा उत्कृष्ट ठहरिएबापत विशेष अङ्क प्रदान गर्नुपर्छ । यसबाट मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ । आम जनताले सूचना माग्ने र पाउने स्थिति सृजना भएपछि उनीहरूले लोकतन्त्रको सकारात्मक अनुभूति गर्नेछन् । जुन मुलुकमा जनता खुशी हुन्छन्, त्यही मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनले पछ्याउने गर्छ ।
सूचनाको हक दिलाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्छ
मोहनबहादुर बस्नेत, मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
अहिलेको सरकार पारदर्शी छ कि छैन ?
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । त्यसैले पनि एकताको पक्षमा सबैलाई सम्मान गर्दै आएको छ । हाम्रा लागि प्रेस स्वतन्त्रताको विषय सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको हुनाले पनि यसको समर्थन नहुने भन्ने त सवाल नै रहेन ।
सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नो काम पारदर्शी गर भनेर भनेकोे छ ?
अहिलेको जमानामा पारदर्शिताको कुरा सरकारले मात्र गर्ने विषय होइन । यो विषय हामी सबैले गर्ने हो । उदाहरणका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा तत्काल बाहिर आएर प्रवक्ताले के भएको भन्ने कुरा फटाफट भन्नुपर्छ । सबै पत्रकार साथीहरूले जे कुरा सोध्नुहुन्छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले गर्ने पारदर्शिताको कुरा त मन्त्रिपरिषद्बाटै शुरू हुन्छ । झनै अहिले त्यसको प्रवक्ता म नै भएकाले मैले सरकारमा जे भएको छ, त्यसको जानकारी गराउँदै आएको छु । पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँ पनि हो । कर्मचारीले गरेको काम पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । आफैबाट पारदर्शिताको शुरुआत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टीको सरकार भएकाले हामीले नभन्ने त कुरै आउँदैन ।
जनतालाई सूचना दिन तपाईंको मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
म यहाँ मन्त्री भएर आएपछि केही नयाँ काम बाहिर ल्याउँदै छु । सूचनाको क्षेत्रमा वा सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेर अहिले हाम्रा साथीहरू विदेशमा बसिरहनुभएको छ । नेपालले विदेशको सूचना सही तरीकाले पाउन नसक्ने अवस्था छ, हाम्रो देशको सूचना देशबाहिर नजाने । सूचनको अभावमा हाम्रा पर्यटन, उद्योगव्यवसाय ओझेलमा पर्ने भएका कारण मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर विभिन्न देशका ठूला शहरमा सूचनादूतहरू नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छु । संविधानले प्रदान गरेको हकअधिकारका विषयमा हामी आफू पनि प्रतिबद्ध छौं । हामी विभिन्न संयन्त्रलाई पनि प्रयोग गर्छौं । अहिले सूचनाको हकको सन्दर्भमा आयोग बनेको छ । आयोगमा विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारी तथा विज्ञलाई नियुक्त गरेर आयोग बनेको छ । यसको संरचनामा र यसले गर्ने कामहरूमा सहयोग गर्दै सूचना दिलाउने सन्दर्भमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हुलाकलाई सूचना बैङ्क बनाउन खोजेको हो ?
हुलाकलाई सूचना बैङ्क बनाउन खोजेको विषय सही हो । हुलाकमा अहिले १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । हुलाकी बैङ्क सञ्चालन गर्दा हुलाकको कर्मचारीमा मात्र सीमित रहँदैन । जनताले नै सरकारी बैङ्कलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसैले यसलाई ठूलो अवधारणा बनाएर अगाडि बढाउन खोज्दै छौं । यति मात्र होइन, सूचना विभागलाई पनि सूचना बैङ्क बनाउन खोज्दै छौं ।
अहिले पत्रकार, प्रवक्ताहरूको नियमित भेटघाट हुने कार्यक्रम बन्द भएको छ, किन ?
पहिला पत्रकार प्रवक्तासँग नियमित हप्ता वा १५ दिनमा हुने गरेकोे भेटको विषय जानकारीमा छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा अहिले म अध्ययनको क्रममा छु । म भर्खर आएकाले पनि केही असहज भएको छ । म सिन्धुपाल्चोक बाढीपीडित क्षेत्रमा गएर आउँदै छु । मैले उनीहरूसँग नियमित भेटघाट गराउनुभन्दा अगाडि तपाईंले के काम गर्नुभएको छ ? भनेर सोध्ने वातावरण भयो भने उचित हुन्छ । अहिले मन्त्रालयलाई विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गर्न लगाउँदै छु । मिडिया सेक्टरलाई के गर्न सकिन्छ भनेर कुराहरू गरिरहेको छु । केही दिनपछि हप्ता दिनमा हुन्छ कि १५ दिनमा हुन्छ, नियमित भेटघाट गर्ने कार्यक्रम गर्नेछु । यसलाई निरन्तरता दिन्छु । त्यो दिनुभन्दा अगाडि मेरो मन्त्रालयले दिने कुरा के हो ? भन्ने विषय निश्चित गरेर गर्छु । अर्कोतर्फ सञ्चारकर्मीले दिन सक्ने के हो ? त्यस विषयमा अलिकति काम गरेर मात्रै यो अभियान शुरू गर्छु ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई कसरी सघाउँछ ?
राष्ट्रिय सूचना आयोग आफैमा शक्तिशाली आयोग हो । त्यसलाई अझ बलियो पारेर आयोगलाई चाहिने स्रोतसाधनलाई परिचालन र व्यवस्थापन गरेर अझ अगाडि बढाउँछु ।
सूचना नदिनेलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सूचना नागरिकको संवैधानिक हक भइसकेको छ, भने सूचना दिन किन रोक्नुपर्‍यो । सूचना सही छ भने त दिनुप¥यो नि । गलत नियत हुनेले मात्र रोक्छ । त्यसकारण यो रोक्ने कुरा ठीक होइन । कतिपय होलान् पारिवारिक, नातागोता, आफन्त, आफ्ना निजी कुरा त्यसलाई रोक्नुपर्नेछ भने रोक्दा हुन्छ । तर, त्यसले आम जनतालाई असर गर्नु हुँदैन । त्यसमा सञ्चारकर्मीले मध्यस्थताका भूमिका निभाउनुपर्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस सूचनाको हकमा प्रतिबद्ध छ ?
मैले अघि पनि यसको जवाफ दिइसकेको छु । सूचनाको हक एउटा मान्छेको मौलिक हक नै हो । यो विषय संविधानमा व्याख्या भएको छ । काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण आधार सूचनाको हक पनि हो । यो बलियो हुनुपर्छ । यसका लागि आफ्नो स्थापना कालदेखि लडिआएको पार्टी यसको पक्षमा नलाग्ने त हुँदै भएन नि !
आम नागरिकलाई सूचनाको हकको ज्ञान दिन के गर्नुपर्ला ?
आम नागरिकलाई सूचनाको हक दिन एउटा त नागरिकहरू आफै सूचना लिन तयार हुनुपर्छ । यसको पहिलो भूमिका सञ्चारमाध्यमले गर्छ । त्यसका लागि निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । यसमा सरकारले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्छ । दूरदराजमा बसेका मान्छेलाई अहिले पनि सञ्चारका बारेमा थाहा छैन । कतिपयले टेलिभिजन हेरेर, एफएम सुनेर तथा पत्रिका पढेर आफ्नो हकको अनुभूति गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यसको माध्यम भनेको सञ्चारजगत् नै हो । सञ्चारजगत्लाई यो हक दिलाउने कुरामा त हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
ऐनले दिन सक्ने भनेर तोकिएका सूचना पनि सेवाग्राहीले नपाएको अवस्था छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
त्यो दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दिएन भने किन दिएन, के कारणले दिएन भनेर हामीलाई जानकारी भयो भने हामीले पहल गर्ने काम गर्छौैं ।
सूचना लिने र दिनेको सुरक्षा हुनुपर्छ
सभापति विकास समिति
सूचना आयोगको काम कारबाही तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
अहिले सूचना आयोग क्रियाशील छ । कार्यालयहरूले माग्नेबित्तिकै सूचना दिन थालेका छन् । सूचनाको हकको अस्तित्व निर्माण भएको छ । तर, समग्रमा सन्तुष्ट हुन भने सकिने आधार बनेको छैन । अझै आयोगले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
सूचनाको हक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छ ?
सूचनाको हक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । सूचना नपाउने अवस्था पनि छैन ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न तपाईंको योगदान कस्तो रहेको छ ?
नागरिकले सूचना हेर्न, विश्लेषण गर्न पाउनुपर्छ । सूचना आयोगसँग संसदीय विकास समिति जोडिएको हुनाले म त्यस समितिको सभापतिका हैसियतले के भन्न सक्छु भने राष्ट्रिय सूचना आयोग र हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । वेबसाइडबाट सूचना दिने र प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ । यस्ता कामबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न राम्रो र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह भएको छ । यसमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दल, सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी र सूचना अधिकारीलाई राखेर सूचनाको हकका बारेमा बताउने गरेका छौं । समितिले पनि विभिन्न काम गरिरहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ मा तोकिएको आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले पालन गरेको जस्तो लाग्छ ?
आयोगले काम, कर्तव्य र अधिकारको पालन गरेको छ । आयोग पहिलाको तुलनामा चलायमान रहेको छ । आयोगले गर्न सक्ने काम गरिरहेको छ । आफूसँग भएको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म नै आयोगले काम गरेको छ । आयोगका प्रमुखको क्रियाशीलताले यसको पहिचान बोध भएको छ ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सूचना माग्ने नागरिकलाई ऐनमा नै संरक्षित, सुरक्षित, पुरस्कृत गर्ने प्रावधान राख्नेतिर सोच्नुभएको छ ?
ऐन केही पुरानो भइसकेका छन् । यस ऐन संशोधन गर्नेतिर सम्बन्धित निकाय लागिरहेका छन् । सूचना माग्ने व्यक्तिको सुरक्षाका लागि हामीले सोचिरहेका छौं । अब हुने संशोधनमा हामीले यस्ता विषय राख्छौं । सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशीलहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् ।
सूचना पाउनु जनताको अधिकार हो । लोकतन्त्रको आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता पनि हो । सूचनाको हक जनताले पूर्णरूपले पालन गरेमा भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता विषय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको काममा हामी सबैले सघाउनुपर्छ ।
संवेदनशील सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्छ
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा सूचना वर्गीकरण समितिको व्यवस्था गरेको छ कहिलेसम्म वर्गीकरण गर्नुहुन्छ ?
ठीक हो, सूचना वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने यो समितिले आवश्यकताका आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गर्छ । खासगरीकन कुन सूचनालाई कसरीे वर्गीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्पादन गरेको कामको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । वर्गीकरण समितिले आफै सूचना वर्गीकरणको पहल गर्दैन । यो वर्गीकरण मूलतः जनतालाई सूचना माग्ने र पाउने जुन अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ, त्यसका लागि सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएको सम्बन्धित मन्त्रालयले वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि माग गरेको अवस्थामा समितिले निर्णय गरी वर्गीकरण गर्ने हो । नेपालमा लिखत गोप्यतासम्बन्धी ऐन निर्माण भए तापनि त्यसको प्रयोग हुन सकेन र अर्थहीन रहेर थन्कियो । लिखत गोप्यता सम्बन्धित ऐन नभएका कारणले गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले कतिपय विषयहरू व्यवस्थित गरेको पनि छ । तर, कुन लिखत गोप्य हुन्छ भनेर त्यस्तो कुराको हकमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले पटके व्यवस्थापनका लागि यो वर्गीकरण समिति रहेको हो ।
तपाईंले नियमित सचिवको बैठक गर्नुहुन्छ, त्यो बैठकमा सबै सचिवलाई जनताको सूचनाको हकको सम्मान गर भन्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
सचिवज्यूहरू अनुभवी र जानकार पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नेपालको प्रचलित कानूनका बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था नै हो । कुनै पनि कानूनको तपाईंले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सचिव बैठकमा मुख्य सचिवले भन्दा त्यो अलिकति अस्वाभाविक हुन्छ । नेपालका कानूनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय प्राथमिक शिक्षा लिँदैै गरेका भाइबहिनीहरूका लागि भन्ने विषय हुनसक्छ । उहाँहरू भनेको त देशको प्रशासन चलाउने, देशको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने पदमा रहनु भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरू हो । मैले भन्नु पर्दैन, उहाँहरू नै त्यसको जानकार हुनुहुन्छ । सार्वजनिक महत्त्वका सूचना प्रवाह विधिसम्मत तरीकाले गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको नाताले उहाँहरूबाट सम्पादन हुने काम हो ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र किन यति गोप्य भएको होला ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय विभागहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने हरेक कामहरूका बारेमा वार्षिक रूपमा पनि उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस किसिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित व्यक्ति र सरोकारवालालाई सम्पादित कामहरूका बारेमा स्वतः जानकारी पनि हुन्छ । हामीले सञ्चारमाध्यममार्फत विभिन्न चरणमा सूचना प्रवाहित गरिरहेको अवस्था छ । यसको अतिरिक्त मन्त्रालय, विभागले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका बारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले समयसमयमा सबै सरोकारवालालाई जानकारी पनि गराउँदै आएका छन् । जहाँसम्म सूचनाको हकको विषय छ, जसले सूचना माग्ने र पाउने अधिकार राख्छ, त्यो अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले सूचना माग गर्न आएको अवस्थामा हामीले दिँदै आएका छौं । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कार्यालय, मन्त्रालय, विभागमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था हामीले गरेका छौं । ती अधिकारीहरूमार्फत सरकारी निकायहरूको सूचना त प्रवाहित भइरहेकै अवस्था छ । मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै सूचनाहरू गोप्य राखिन्छन् भन्ने तर्क जायज हो । अर्को पक्ष सूचना आयोग अत्यन्त क्रियाशील र चलायमान भएको अवस्थामा सूचना कुन हदसम्म गोप्य राख्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुराको ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । पाँचओटा विषयवस्तुमा बाहेक अन्य सूचनाहरू पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैले कानूनी सीमाभित्र रहेर सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई मुख्य आधार मानेर सूचना प्रवाह गर्ने हो । सूचना माग गर्दा पनि त्यही हिसाबले माग गर्ने हो । नेपालमा किन सूचनाहरू गोप्य हुन्छन् भनेको भए सम्पूर्ण निकायहरू कानूनद्वारा निर्मित, स्थापित निकायहरूका विषयमा कुरा हुन्थ्यो । यसमा नेपाल सरकारका संयन्त्रमात्र होइनन्, कानूनबमोजिम गठित र स्थापित हुने सङ्घसंस्थादेखि लिएर कम्पनी, कर्पोरेशन वा प्राइभेट कम्पनीसमेतले नागरिकका लागि सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यति हदसम्म सूचना आयोग पनि क्रियाशील रहेको देखिन्छ । सूचनाको हक भन्ने विषय केवल सरकार र जनतासँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो अन्य क्षेत्रमा लागू हुँदैन भन्ने बुझाइ धेरैको हुन सक्छ । यथार्थमा नेपालमा रहेका हरेक किसिमका कानूनद्वारा निर्मित संस्थालाई त्यो कर्तव्य निभाउनुपर्ने जिम्मेवारीे छ ।
गोप्य हुनुको कारण भ्रष्टाचार बढ्यो भनिन्छ नि, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
गोपनीयताले भ्रष्टाचार बढाउँछ भन्ने विषयसँग म त्यति धेरै सहमत छैन । कुनै प्रसङ्गमा त्यस्तो हुन सक्ला, निर्णय लुकाउने प्रयोजनका लागि । हामीले कुनै सूचनालाई पारदर्शी बनाउने भनेर भनिसकेपछि, ती सूचनाहरू कुनै एउटा व्यक्तिले गोप्य राख्न सक्दैन । जब कुनै पनि सूचना गोप्य हुँदैन र पाँचओटा मूलभूत आधारमा बाहेक गोप्यता राख्न सकिने अवस्था छैन । गोपनीयताकै कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो । यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पनि छ । भ्रष्टाचारका अवयवहरू त्यहाँ रहेका हुन सक्छन् । यसको अर्थ कसैलाई सूचना नदिएका कारण त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर पूर्वानुमान लगाउन भने मिल्दैन ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, मेरो भूमिका अरू जिम्मेवार अधिकृतहरूको भूमिका जस्तै हो । कसले कति भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नै निर्धारण गरेको छ । कानूनको इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
प्रजातान्त्रिक समाजमा सूचना र तथ्याङ्कको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने काम, नीति निर्माण गर्ने, निर्णयमा संलग्न हुने सबैको कर्तव्य हो । सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई जीवन्त राख्ने प्रयोजनका लागि पनि सूचना प्रवाह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
राष्ट्रिय अखण्डता तथा अक्षुण्ण राख्ने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्नका लागि पनि केही यस्ता सूचना जसलाई हामीले गोप्य राख्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्न पनि आवश्यक छ । कतिपय यस्ता सूचना हुन्छन्, जसका कारण राष्ट्रिय अखण्डता तथा प्रजातन्त्रलाई आघात पर्न सक्ने र सामाजिक सम्बन्धमा खलल पार्ने प्रवृत्तिका सूचनालाई जतिसक्यो गोप्य राख्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संवेदनशील सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा रहन्छ । तसर्थ जसरी सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी उत्तरदायीपूर्ण तरीकाले हामीले गरेका छौं, त्यसरी नै संवेदनशील सूचनाहरू गोप्य राख्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हामीले नै गर्नुपर्छ ।